AC Milan oo xagaaga doonaysa Ki Sung-Yueng – Gool FM
AC Milan oo xagaaga doonaysa Ki Sung-Yueng
(Swansea City) 24 Feb 2018 – AC Milan ayaa isha la raacaysa laacibka khadka dhexe ee Swansea City jaalle Ki Sung-Yueng xagaaga, kaasoo ay doonayaan inuu kayd u noqdo Franck Kessie.
Sida ku qoran Corriere dello Sport, agaasimaha isboortiga ee Massimiliano Mirabelli ayaa raadinayay Korean-kan tan iyo markii uu amaahda ku joogey Sunderland fasalkii 2013-14.
Wuxuu 29 jirsadey bishii hore iyadoo uu qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka fasalkan, taasoo ka dhigaysa laacib xor ah, isagoo xilligiisa inta badan ku qaatay Britain, tan iyo markii uu kasoo tegey FC Seoul bishii Janaayo 2010 oo ay soo qaadatay Celtic, kaddibna Swansea oo in yar mar amaahisay Sunderland.
Ilaa haatan wuxuu dhaliyay 1 gool, 2 kalena wuu dhigay 20 kulan oo uu Swans u saftay fasalkan, isagoo kabtan u ah xulkiisa South Korea, isla markaana noqday xiddigga sanadka ee Swansea’s Player of the Year sanaddii 2014-15.
''Serie A waa jaamacadda kubadda cagta''- Rafinha
Villarreal oo war rasmi ah ka soo saartay laacibkeeda xabsiga ku jira ee dilka loo haysto